July (18) June (9) May (10) April (14) March (8) February (14) January (7) Arrimaha Bulshada Hargeysa: Hooyo umuliso ah oo taksina ku shaqeysa Sahra Maxamed Cali, waa madaxa qeybta dhalmada ee xannaanada Daryeel ee xaafadda Sheekh Nuur, waa umuliso ay soo wacdaan oo guryahooda ku dhalisa haweenka foolanaya ee xaafaddeeda, waa gabadha keliya ...
Dhallinyaro ku shaqeysta farsamada gacanta oo si bilaasha ah ay ku barteen Magaalada Gaalkacyo waxaa ku yaalla iskuul lagu barto xirfadaha gacanta. Ardayda oo u badan dhallinyaro ayaa si bilaash ah lagu baraa xirfado ay ka mid yihiin biyo galinta, korontada iyo kuwo kale. We...
Nin barakace ah oo bartay xirfadda birtumista, kuna maareeya noloshiisa Xasan Abuukar Yaasiin waa aabo 36 jir ah, dhalay 7 carruura isaga iyo xaaskiisa waxay ku soo barakaceen abaarta ku dhufatay degmada Qoryooley ee gobolka Shabeellaha Hoose. Qoyskaan ayaana xoolaha abaa...
Jaceylkii Jimcaha ee fannaan Xintir Xintir Cumar Caweyr, waa fannaan, wuxuu sidoo kale sameeyaa oo laxan uu saaraa heesaha. Waxaa jirtay qiso jaceyl oo soo martay Xintir, xilli uu joogay degmada Af-gooye. Jaceylkaas, heeso ayuu ka samee...
16 JUL 2017 Akhri
Cadaado: Shillinka Somaliga oo la diiday ayaa samayn nololeed ku yeeshay dadka dan yarta ah Dadka ku nool degmada Cadaado ee gobolka Galgaduud ayaa sheegaya in uu saamayn ku noloshooda shillinka Soomaaliga ah oo muddo todobaad ka badan aan laga isticmalay. Arrintaan ayaa jaah wareer ka dhali...
Barnaamijka codka dhegeystaha Waa barnaamijka codka dhegeystaha oo todobaadkasta aad Sabtida maqashaan, dhegeystayaasha ayaana fikirkooda kaga soo dhiibta barnaamijyada raadiyaha Ergo. Waxaana isku soo duba rida Cabdulaahi Maxamed...
Shaqo-abuur fursado ay nolosha kula soo baxaan u noqday dadka ku barakacay Boosaaso (ERGO) - Cabdinuur Xasan Maxamed, wuxuu bishii labaad nolosha qoyskiisa oo ka kooban labo xaas iyo lix carruur ah ku maareeyaa dhaqaalaha uu ka soo saarto dukaan lacag deyn ah loogu maalgeliyay. ...
Internet la'aanta Muqdisho oo curyaamisay howlaha shirkadaha duullimaadyada Muddo saddex toddobaad ah oo uu go’an yahay khadka internet-ka ee Muqdisho ayaa la dareemayaa inuu curyaamiyay howlaha shirkadaha waaweyn iyo shaqooyinka ku xirnaa adeegga internet-ka.
Ma xiiseyneysaa ka qeybgalka mashruucan dhallinyarada iyo dowlad-wanaagga? IMS-FOJO waxay madal cusub oo shaqo oo online ah u abuurayaan dhallinyarada Soomaaliyeed iyo weriyeyaasha. Madashan waxa ay noqon doontaa madal furan oo bulshada gudaha iyo kuwa dibadda u soo bandhigt...
Raashinka qaaliyoobay iyo qiimo-dhaca shilinka Somaliland oo adkeeyay nolosha dad badan (ERGO) - Qiimaha lagu kala iibsado raashinka ee magaalada Hargeysa iyo deegaannada kale ee Somaliland oo sare u kacay ayaa sababay in Cabdikariim Xuseen Iidle iyo dadka la mid ah ee ay noloshooda...
Haweenka booliska ah oo ka qeyb qaadanaya yareynta tacaddiyada dumarka (ERGO) - Hani Xaaji Axmed oo ah dambi-baare ka tirsan ciidanka Booliska Soomaaliya ayaa ka mid ah boqollaal haween ah oo tan iyo markii ay ciidanka ku biireen uu taliska ku amaanay inay ka qeyb q...
Wareysi: Dowladda oo mashruuc biyo-gelin ah ka sameynaysa miyiga oomanaha ah (ERGO) - Dowladda Soomaaliya ayaa wadda qorshe biyo-gelin ah oo ay ka sameynayso deegaannada oomanaha ah iyo miyiga fog si loo yareeyo barakaca iyo saameynta abaarta ay ku yeelatay gobollada dalk...
Ganacsiga Beledweyne oo u xiran diidmada shilin Soomaaliga (ERGO) - Qofka yaqaanna ganacsade uu raashin ka amaahan karo iyo kan uu deriskiis keyd u yaallo ayaa ah dadka keliya ee wax karsan kara magaalada Beledweyne. Arrintan ayaa ah natiijada ka dhalata...
04 JUL 2017 Akhri
Ganacsatada degaanka Awrboogeys oo sheegaya in abaaruhu fara mariyeen Deegaanka Awr-goobeys oo ka tirsan gobolka Sool ayaa ganacsateedu sheegayaan inay noqdeen kuqo fara maran. degaankaan oo Laascaanod dhinaca bari ka xiga 145km ayaa muddo saddex sano oo is xigta abaar ...
Dhaqaale xumo ay abaartu keentay oo saameysay ganacsatada Awr-boogeys (ERGO) - Aamina Xuseen Bile oo ah 45 jir ka mid ahayd ganacsatada ugu dhaqdhaqaaqa badan deegaanka Awr-boogeys ee gobolka Sanaag ayaa saddexdii bilood ee u dambeysay wuxuu qoyskeedu ku tiirsan ya...